Iindaba -I-BMW icwangcisa uqhwithela ngohlobo olunomda lwe-Dark Shadow X7 SUV
I-BMW icwangcisa isaqhwithi ngohlobo olunomda we-Dark Shadow X7 SUV
I-BMW Australia iyakuthintela ngokungqongqo ulwabiwo lweemodeli ezintsha zeX7 Dark Shadow Edition kwiimodeli zeXDrive30d kunye neM50i, kwaye iyakwaziswa apha ekhaya ngoMatshi 2021, ibe mihlanu kuphela kwimodeli nganye.
Ivenkile yakwaBMW iququzelela ukubhukisha ngokufuna idiphozithi eyi- $ 5,000, emva koko ibeka iodolo kwaye yazise umthengi okhetha umthengi ukuba athethathethane kwaye ekugqibeleni anikezele kwaye ahambise ngo-2021.
I-BMW X7 Dark Shadow Edition iveza iimveliso zeprojekthi ezizodwa ze-BMW okokuqala ukubonelela ngengqondo yomyalelo ongenakulinganiswa. Inombala omnye kuphela. I-BMW ekhawulezileyo yeArctic Gray Metallic
Imbonakalo enamandla igcwalisa i-V-Spoke 22-intshi yokukhanya kweevili zentsimbi kunye nokugqitywa kweJet Black matte.
Umgca wesithunzi oqaqanjelwe ngumntu we-BMW onomxholo owandisiweyo uthatha indawo yokugqitywa kwe-chrome ukubonelela ngombono ophakamileyo, ngelixa iglasi elangeni elonyusa ukubonakala okumangalisayo ngelixa libonelela ngasese ngakumbi kubahambi abakhwela ngasemva.
I-iconic eluhlaza okwesibhakabhaka iM Sport brake calipers edityaniswe neempawu zeblue X zenkqubo ye-BMW Laserlight ibonelela ngokwahlukileyo.
I-X7 ye-Shadow yoHlelo lweKhabhathi yoHlelo luphawuleka ngezinto eziphambili kunye nezinto zoyilo ezizodwa kule modeli. Ixhotyiswe ngezihlalo ezi-BMW ezintle kwaye ihonjiswe ngeethoni ezimbini ezithambileyo zesikhumba seMerino ebusuku eluhlaza / emnyama kunye neepateni zokuthunga eziphezulu.
Uhambo oluphezulu lwe-cockpit lubonisa iitoni ezinzulu ezinobunzulu esibhakabhakeni esimnyama, kwaye zenziwe nge-BMW ye-Walknappa yesikhumba esiyi-Night Blue eluhlaza evela kwinxalenye ephezulu yedashboard kunye nomphezulu womnyango ongaphezulu.
I-BMW eyenziwe ngophahla lwe-Alcantara eluphahleni kunye nokukhanya okuluhlaza okomnyama kubonelela ngolunye uhlobo ngokuthe chu kwiimveliso zesiko ngelixa longeza ucoceko.
Ubume be-aluminium obenziwe ngobunono buhombisa umphezulu wangaphakathi we-BMW Individual'Fineline Black ', icala lokuqala le-BMW X7, ebonelela ngobume obungathandabuzekiyo bobuhle ngokudibanisa izinto ezimbini.
Itekhnoloji yeCrafti yokucacisa iglasi yekristale ecwangcisiweyo yeBMW isetyenziswa kwisikhethi sokutshintsha, umlawuli we-iDrive kunye neqhosha elithi "Qala / Yeka", ukongeza imvakalelo entle nenhle.
Uphawu lwe "Edition Dark Shadow" kwikhonsoli yeziko luqinisekisa ukubakho kwale modeli ngelixa usongeza iziphumo zokuhombisa ezikumgangatho ophezulu.
Ushicilelo lwe-X7 Shadow sisithuthi esidumileyo sokuthuthuzela kwabo abakudidi lokuqala, ukuqhuba ngokugqwesileyo kunye neempawu zokuphatha, kunye nenqanaba lezixhobo ezibanzi, ukubonelela ngesibheno esongezelelweyo sobugcisa kunye nezixhobo.
I-3.0-litre 6-cylinder turbo diesel yeXDrive30d M Sport inokubonelela nge-195kW kunye ne-620Nm yamandla, ngelixa iflegi ye-M50i's 4.4-litre 8-cylinder twin-turbo petroli injini inamandla angama-390kW kunye nama-750Nm.
Ixabiso le-Dark Shadow X7 lisetelwe kwi- $ 188,900 yeXDrive30d M Sport (ngemoto) kunye ne- $ 215,900 ye-M50i (ngemoto). Ukugcinwa kwe-Dark Shadow Edition kwenziwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi ngokusebenzisa iVenkile entsha ye-BMW, ​​kwindawo yokuqala eza kuqala.
Wamkelekile kumanqaku e-Australia. Iqela lethu leentatheli ezinobungcali, ababhali kunye nabavavanyi beenqwelo moya bazinikezele ekuboneleleni ngeemoto ezintsha kunye neendaba zezithuthuthu kunye novavanyo, kunye neengcebiso onokuzithemba.
Siphakamisa isilogeni sokubonelela ngokunyaniseka, ngokuziphatha nangokulungileyo, kwaye sinethemba lokuba amabali owafundayo ayonwabisa, ayafundisa, ayodwa kwaye anomdla.